बरिष्ठताको आधारमा संबैधानिक इजलास गठन हुने : यी हुन् सम्भावित न्यायाधिश - Kantipath.com
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलास गठन गर्न सहमत भएका छन्। मंगलबार सर्वाेच्च बारका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा प्रधान्यायाधी राणा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलास गठन गर्न सहमत भएका हुन्।
संवैधानिक इजलासबारे विवाद देखिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा र सर्वाेच्च बारका प्रतिनिधिबीच छलफलपछि यस्तो सहमति जुटेको सर्वाेच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले बताए। यसरी इजलास गठन भए पाँच सदस्यीय इजलासमा राणासँगै दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ इजलासका लागि छानिने छन्।
यसअघि गत वर्षको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा हरिकृष्ण कार्कीले हेरेको विषयमा समेत अधिवक्ताले प्रश्न उठाएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधीवक्ता रहेका कार्कीले त्यसपछि इजलास छाडेका थिए। यसपालि पनि उनी इजलासमा बस्न नमिल्ने भए वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा संवैधानिक इजलासमा हुनेछन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाका लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीका विषयमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए। जसका कारण सुनुवाइले विषय प्रवेश समेत पाएको छैन।
सर्वाेच्च बारका अध्यक्ष शाक्यका अनुसार मंगलबारको सुनुवाइ स्थगित हुन सक्ने बताए। तर, अन्तिम सुनुवाइ भन्दा अघि नै वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुने उनले शाक्यले बताए।
‘संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा सहमति भएको छ। संवैधानिक इललासको नियममै आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गरी वरिष्ठताको आधारमा इलजास गठन गर्ने र त्यसरी गठन गर्दा पनि वरिष्ठ सदस्यलाई पनि ‘कन्फ्लिट अब इन्ट्रेस्ट’ वा स्वास्थ्यको कारणबाट बस्न नसक्ने भयो भने उहाँले कारणसहित नबस्ने’, शाक्यले भने, ‘सूचना दिएपछि त्यसभन्दा तल वरिष्ठतामा जो छ, उसैसहितको इजलास गठन गर्ने कुरामा प्रधानन्यायाधीशज्यूले सहमति जनाउनुभएको छ। चाँडै नै संशोधनको प्रस्ताव ल्याएर ‘फुलकोर्ट’बाट छलफल गरी ‘अप्रुभ’ गरी न्याय परिषद्‌बाट संशोधन गरी एक हप्ताभित्र संवैधानिक विवाद अगाडि बढाइने छ।’
Previous Previous post: बजेटले निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गरेको छ : व्यवसायी महासङ्घ
Next Next post: दुई न्यायाधिश इजलासबाट आउट
डाक्टरी पेसा छाडेर पोर्न स्टार !
भ्यागुतोले पत्ता लगाउन सक्छ, ‘तपाईं गर्भवती भए /नभएको’
२ करोडको गाडी किनेर तेल हाल्न कुखुरा चोरी
फेसबुक लाइभमा मन्त्रीको अनुहारमा बिरालो !
अब हलमै हेर्न मिल्ने ‘पोर्न फिल्म’
१००० सिक्का खाने ‘पिग्गी ब्याङ’को निधन
बाबुले छोरीसँग प्रेम गर्नेको लिंग काटिदिए आखाँ फुटाइदीए
आकासमै बच्चा जन्माएपछी …..
४ सयवटा समुद्री तटमा निर्वस्त्र हिँड्डुल गर्न पाइने
उपप्रमुखले दिइन् छोरा हेर्न पतिलाई जागिर , २३ हजार मासिक तलब